နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: မြန်မာအတိုက်အခံများထဲတွင် စိတ်ဖောက်ပြန်သူများစွာ ရှိနေကြောင်း ထူးထူးဟန်မှ သက်သေပြ
Posted by ဒေါ်လာစား on 00:01
ထူးထူးဟန် (ယခင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ယခု ဒုက္ခသည်၊ အော်ဇီ) ။ ။ "ကျွန်တော် လူသတ်သမားပါ" ဆန္ဒပြသူ ၂၄ ဦးထက်မနည်း ကိုယ်တိုင် ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး ၁ဝဝ ကျော် သတ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
( ကျောင်းဆင်းစ စစ်ဗိုလ်က အဲ့လောက်တောင် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိခဲ့တာလား။ ဗိုလ်ထူးထူးဟန်တောင် ဒီလောက် သတ်လာရင်၊ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထဋ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ၁၀၀ ကျော် သတ်ခဲ့မှာပဲ။ ICC ကို အတူသွားဖို့သာ ပြင်ပေတော့ )
"တနေ့ကို ၄ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရတယ်၊ ၃ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရတယ်။ ဦးနှောက် မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မရဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ အရမ်းရှုတ်ထွေးနေတဲ့ အချိန်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာလည်း ကျနော်က အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး’’
(ဂေါက်ရတဲ့အကြောင်းထဲမှာ အဲ့ဒါလည်း ပါမယ်)
"ကျနော် အသက် ၂၂ နှစ်မှာ ၉ တန်းကျော်ငးသားအနေနဲ့ ကျောင်းသားထုထဲဝင်လာတာပေါ့ ’’
( ၂၂ နှစ်နဲ့ ၉ တန်း လို့ လိမ်ဝင်ခဲ့တာတဲ့၊ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေ အခုမှ အ တာမှတ်နေတာ အဲဒီတုန်းကကတည်းက သူများအညာခံနေရတာကိုး)
"DSA ၂ နှစ်တက်ခဲ့တယ်၊ ရွှေဓား လည်း ရခဲ့တယ် ’’
( ထူးထူးဟန် ၁၈ နှစ် တုန်းက ၁၉၈၅ ခုနှစ်ပါ။ အဲဒီတုန်းက DSA က သက်တမ်း ၄ နှစ် တောင်တက်ရတယ်။ DSA ကို ၂ နှစ် တက်ပြီး အရာရှိဖြစ်တာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ထူးထူးဟန် တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒီထက်ဆိုးတာက ရွှေဓား ရခဲ့တယ်တဲ့။ သူ့ဘကြီးက ပန်းတိမ်ဆရာမို့နေမှာ။ DSA မှာ အမှတ်စဉ် ၁ ကတည်းက ငွေဓားပဲ ပေးလာတာ သူ့ကျမှ ရွှေဓားတဲ့။ တွေ့ရင် ခဏလောက် ငှားကြည့်ချင်တယ်ဗျာ၊ အဆိုးဆုံးကတော့ ကျောင်းဆင်းတာနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးသင်တန်းတောင် မတက်ရပဲ ထောက်လှမ်းရေးရာက်တယ်တဲ့။ ယုံလိုက်ကြအုံးပေါ့ လူဗြိန်းများ)
"DSA မှာ ဘယ်ကျောင်းတက်ခဲ့ရလဲဆိုတာ ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော့်မှာ ဒီမှာ ရဲဘော်တွေ တချို့မိဘတွေက ဗမာပြည်မှာ ရှိနေတယ်။ သင်တန်းက နံပတ်စဉ်တွေ ပြောချလိုက်ရင် အကုန်လုံး ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ ’’
( DSA က ဘယ်ကျောင်းတက်ရလဲ ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့၊ ကျနော့်နာမည် ထူးထူးဟန် ပြောလို့မဖြစ်ဘူး လို့ဖြစ်နေတယ်။ DSA တက်တုန်းက ငွေဓါး (အဲလေ) ရွှေဓားတောင် ရထားပြီး ၂ နှစ်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ပို့ခံရအောင် ထူးချွန်နေတာပဲ အဲဒီတုန်းက ဘာမှမဟုတ်တာမှ မလုပ်ခဲ့တာ အမှတ်စဉ်တော့ ပြောနိုင်သင့်တာပေါ့၊ အောင်လင်းထွဋ်တောင် ပြောနိုင်သေးတာပဲ၊ မဟုတ်မှလွဲရော အမှတ်စဉ်ကို ကြိုတွက်မထားဘူးထင်တယ်။ )
"ကျနော့်ကို ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ထည့်ပေးတယ်။ ကျနော်က အဲဒီ ၂၀၀၀၀ စလုံးကို တပတ်အတွင်းမှာ သုံးပစ်လိုက်တယ်။ ကျနော့်ကို နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုနဲ့ သေဒဏ်ချနိုင်တယ်” အဲလိုမျိုး ခြိမ်းခြောက်လာတယ်’’
(ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ တစ်ပတ်အတွင်း သုံးတာနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးက နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနဲ့သေဒဏ်ချမယ်တဲ့။ မဟုတ်မှလွဲရော အဲဒီခေတ်ကတည်းက ဒေါ်လာ ၂ သောင်းကို တစ်ပတ်နဲ့ သုံးခဲ့တယ် ကွ လို့များ လူသိစေချင်တာလား။ )
"ကျနော်က ထောင်ထဲမှာ အရိုက်ခံရတာကိုး။ ကျနော် MI6မှာ လုပ်နေတာကို ထောင်က အရာရှိတွေကို ပေးမသိဘူး။ ပေးမသိတော့ ကျနော့်ကို ကျောင်းသားပဲ ထင်တာပေါ့။ ’’
(စုံထောက်က ဘယ်သူမှမသိအောင် သူလျှိုလုပ်ပြီး ထောင်ကျ အရိုက်ခံရတယ် ဆိုတာ ဇတ်ကားထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ အော်ဇီရောက်မှ စုံထောက်ကားတွေ ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ် ဇတ်လမ်းဆင်နေတယ်ထင်တယ်)
"ကျနော်အပါအဝင် ၉ ယောက်ပေါ့နော်။ တခြားသူတွေ့က စီးပွားရေးအရ အရမ်းအောင်မြင်နေကြပြီ၊ အိမ်တွေ၊ ကားတွေနဲ့။ ’’
(အော်... တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသူရဲကောင်းကြီးတွေက သူများနိုင်ငံမှာ ကောင်းစားနေကြတာပါလား)
"တယောက်ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး စွဲနေပြီး၊ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ပေါ့။ သူလည်း လုပ်ခဲ့တာတွေ၊ ဒီမတရား လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ၊ ကျနော့်လိုပေါ့။ စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်တယ်ပေါ့ ’’
(မူးယစ်ဆေးတောင် စွဲနေလိုက်သေး။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်ကျရောဂါသည်၊ အပေါင်းအသင်းတွေကလည်း စိတ်ကျသူတွေနဲ့ မူးရစ်ဆေးစွဲသူတွေ။ ဒီလူတွေနဲ့မှ ဒို့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီမရရင် နောင် ဘယ်လွယ်လိမ့်)
" အိုးဝေအောင်တို့၊ ရဲတေဇတို့ဘာတို့ အခုအမေရိကမှာ ရှိပါတယ် ဒီကောင်တွေ။ ကျနော်နဲ့ အတူလုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေ’’
(အိုးဝေအောင်က ထူးထူးဟန်ကို မသိဘူးတဲ့)
"ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်က ICC ကို ရောက်ချင်တယ် ’’
( ICC တော့ မမြင်ဘူး၊ အရူးထောင်နဲ့တော့ နိးနေပြီ)
"ကျနော်က ပန်းချီဆရာအလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ ဆုတွေရတယ်။ မနှစ်က တသောင်းဆု ရတယ်လေ။ ကျနော့်ပန်းချီကားတွေက ဈေးအရမ်းကြီးတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံလူ မဝယ်နိုင်ဘူး။ ကျနော့်ဟာ ကျနော် ဆွဲတယ်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် လုပ်တယ်။ ’’
(စိတ်ပြေလက်ပျောက်နဲ့ တော်ရုံလူမဝယ်နိုင်တဲ့ ဆုရပန်းချီကားတွေ ဆွဲနိုင်တဲ့ လူပါလား၊ တစ်ပတ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၂ သောင်းသုံးခဲ့တယ် ပြောတုန်းက ကြွားလှပြီထင်နေတာ။ ခုမှ ပိုဆိုးနေ)
" ခုထက်ထိပေါ့ ဆက်လက် ဆေးကုသမှု ခံယူနေဆဲပဲ ’’
ဘုန်းကျော် (ယခု ဒုက္ခသည် အော်ဇီ) ။ ။"ကိုထူးထူးဟန်ကို သံသယနဲ့ ရေးလာပြောတာကိုကြည့်ပြီး တခါတလေ အဲဒိလိုသံသယမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေဟာ ခေါင်းမရှိသလိုပဲ။ ဒီကိစ္စက အမှုသေးသေးလေးမဟုတ်ဘူး။ အနည်းဆုံးထောင်ကျနိုင်တယ်။ ဂေါက်ပြီးပြောရင်တောင် စစ်လားဆေးလားမြန်းလားနဲ့ ဘယ်လောက်အလုပ်ရှုပ်တယ်မှတ်လဲ။ ကျနော်သာဆိုရင် ဘာဘီကျူနဲ့ဘီယာပဲ ဇိမ်ခံပြီးသောက်တော့မယ်။ ဒီလိုပေါက်ကရကို ဘယ်တော့မှမပြောပါ။’’
"ဒီလောက် အန္တရာယ်များတဲ့ ၀န်ခံချက်ကို ကျနော်သာဆိုရင် ဘယ်တော့မှမပြောပါ။ အနည်းဆုံး အလုပ်ရှုပ်တယ်။ ရဲတို့ တရားရုံးတို့နဲ့ စကားပြောရတာ အရမ်းအလုပ်ရှုပ်တယ်။ Centerlink ပိုက်ဆံစားပြီး သြစီဝိုင်တစ်ခွက်နဲ့ ဘာဘီကျူစားပြီး ဇိမ်ပဲခံမယ်။ ဒီလိုမျိုး ပေါက်တကရတော့မပြော။’’
"နာမည်ကြီးချင်ရင် တခြားနည်းလမ်းရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုထူးထူးဟန် ဂေါက်တာဆိုရင်တော့ မတက်နိုင်။’’
"သူပြောသလို ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းအရှိတွေရဲ့ သားတွေသမီးတွေလည်း ပြောတာကို တွေ့ဘူးပါတယ်။ မယုံမရှိနဲ့။ အိမ်ရှေ့ ကိုလာပြီး သေနတ်နဲ့ တေ့ ပစ်သွားနိုင်တယ်။ ကျနော် စစ်ထောက်လှမ်းရေးတစ်ဦးနဲ့ တစ်ရုံးတည်းနေဘူးပါတယ်။ မဲ့ဆောက်က ရုံးမှာပါ။ သူစစ်ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာ မသိခဲ့ပါ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုထူးထူးဟန်ရဲ့ သတ္တိကို ချီးကျူးပါ။’’
စိုးမြင့်အောင် soemyintaung08@gmail.com (ယခင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ယခု ဒုက္ခသည်၊ အော်ဇီ) ။ ။ "ထူးထူးဟန်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော်သိသမျှလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ ၁၉၈၇မှာကျနော်တို့ တရပ်ကွက်ထဲ အတူနေခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်က ထူးထူးဟန်ညီနဲ့ကျနော်နဲ့က ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းပါ။ကျနော်က ၈တန်းကျောင်းသားပါ။ထူးထူးဟန်တို့အိမ်က ကျနော့်အတွက် စားအိမ်သောက်အိမ်ပါ။’’
"ထူးထူးဟန်အဖေက ကားပွဲစားလုပ်ပါတယ်။ထူးထူးဟန်ကလည်း သူ့အဖေနဲ့အတူ ကားပွဲစား လုပ်ပါတယ်။’’
"၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးမှာ တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် လူငယ် တွေအဖြစ် ...ထူးထူးဟန်ရော...ကျနော်ပါ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ထူးထူးဟန်က သုံးရောင်ခြယ်အဖွဲ့မှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားကြောင်း ကျနော်သိရပါတယ်။’’
"ကျနော်က တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် သပိတ်တပ်ပေါင်းစုမှာ သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေး လုပ် ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၈၈၈၈ပြီးနောက်ပိုင်း ... စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် -န၀တက စစ်အာဏာသိမ်းတော့ ထူးထူးဟန် တောခိုသွားပါတယ်။
တကယ်တမ်းပြောရရင် လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ထူးထူးဟန်ပြောစကားတွေက (မီဒီယာများတွင် သူသည်စစ်ထောက်လှမ်းရေးဘ၀က လူများသတ်ခဲ့သည်ဟု ထုတ်ပြောသော စကားတွေက) ကျနော်နဲ့ထိစပ်ခဲ့သမျှတွေနဲ့ လုံးဝ ကွာခြားနေပါတယ်။ သူပြောနေတာတွေက ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါးတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။’’
ထိုသတင်းအားသုံးသပ်ကြည့်ရလျှင် ဒီလောက်ထဲထဲဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ တယောက်က ၈၉ခုနှစ်မှာစာရွက်စာတမ်းဖြန့်ဝေမှု့ဖြင့် ထောင်၃နှစ် ဘာလို့ကျရတာလဲ၊ (တချို့သတင်းလိုချင်လို့ထောင်ကျခံပြီးဝင်တဲ့သူလဲရှိပါတယ်၊) ဒါပေမယ့်သူက တကယ်ထောင်ကျလို့သာ အခု သြစတြေးလျမှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နဲ့နေ နေတာပါ၊ တကယ့်ထောက်လှမ်းရေးတွေ ၈၈တုန်းကထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်တဲ့သူတွေ န.၀.တ၊ န.အ.ဖ လက်ထက်မှာကောင်းစားနေကြတာအားလုံးအသိပဲ၊( ဥပမာ.ဖိုးကံကောင်း၊ ဗိုလ်ကြီးစည်သူ၊ အရေးအခင်းမှာပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ တပ်မ၂၂ တပ်မမှူး ဗခတင်လှတို့) သူ့ကျမှဘာလို့ထောင်ကျရတာလဲ၊ နောက်ပြီး ဘီဘီစီက အမေးမှာ ဘာလို့ဒီအချိန် နှစ်၂၀ကြာမှဖော်ထုတ်ရလဲဆိုတော့ အီး၊ အဲ နဲ့ဖြစ်နေတယ်၊ နောက်သူ့အပြောအရ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တယောက်၊ ဒီဘက်မှာ အော်ဖစ်ဆာကြီးတယောက်တဲ့၊ တျောင်းဆင်းကာစ တပွင့်နဲ့ဗိုလ်လေးတယောက်ကို ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တွေပေးပါ့မလား၊ (ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ၊ ဒီလူသည် D.S.A 29 မှာရွှေဒါးဆုရခဲ့ပြီး လှမ်း၆တွင် တာဝန်ထမ်း ဘူးသူဟုတ်မဟုတ် ကွန်ဖန်းလုပ်ကြည့်ပေးပါ၊) သူနဲ့ထောင်အတူကျဖူးသူရဲ့အပြောအရတော့ စိတ်ဖိစီးမှု့တွေများနေတယ်လို့ ယဉ်ယဉ်လေးပြောထားတယ်။’’
ကိုအောင်ဇော်နဲ. အဖွဲ.သားများရောစာဖတ်သူတွေရော ကျုနော် comment ကိုဖတ်ပြီးရင် သူ.ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတာကို သိပါလိမ့်မယ်။ ထူးထူးဟန်တကယ်လုပ်ခဲ့တာပဲ ဆိုပြီးယုံကြည်နေသူများလဲ အမှန်သိနိုင်အောင်ပါ။ အခုသူလုပ်တဲ့ အလိမ်အညာက ပေါ်သွားရင် အာဏာရှင်တွေ တကယ်လုပ်နေတာတွေက မှေးမှိန်သွားပြီး နိုင်ငံတကကာက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံတွေကို အထင်သေးအမြင်သေး ဖြစ်သွားဖို.က သေချာနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ အမှန်တရားပေါ်အောင် သတင်းသမားတွေကိုရော စာဖတ်သူတွေကိုပါ ဘယ်သူက ဘာလဲဆိုတာ သေချာသိအောင်လို. ရေးလိုက်တာပါ။ ’’
အမည်မဖော်ဝံ့သူ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား သူရဲကောင်းတစ်ဦး ။ ။ "ထူးထူးဟန် ၂၀၀၃ ခုမှာ ခြေခြင်းခတ်ပြီး လက်မှတ်ကောက် ကမ်ပိန်း လုပ်ချိန်မှာ ဒီမို အရေးနှင့် သြ စီမြန် မာအဖွဲ့ တွေက အဲဒီကောင်ကို အားမပေးနဲ့ဒီကောင်က ထောက်လှမ်းရေး၊ ဘန်ေ ကာက်မှာ ခြေချင်း လိမ်ပြီး အတိုက်ခံ အဖွဲ့ တွေကို ဒုက္ခပေးတဲ့လူ။ ဒီလူက ခုမှ နိုင်ငံရေး ကန်ပိန်း ဆိုပြီး လျောက် လုပ်နေတာ။ တချို့ ဆရာကြီးများက သူ့ ရဲ့ ကန်ပိန်းကို စတိန့် မန့်တွေပါ ထုတ်ပြီး လုံးဝ မထောက်ခံကြောင်း ထူး ထူးဟန်သည် မြန်မာ ထောက်လှ မ်းဖြစ်ကြောင်း စစ်အစိုးရ ဖက်လြူ ဖစ်ကြောင်း ဆိုပြီး စာတွေ ဘာတွေ ထုတ်ပြီး သူ့ ရဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ရပ်များကို သြစတေး လျမြန်မာ အဖွဲ့ များ လုံးဝ မထောက်ခံရန် ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ြ ကတာ။ ခုသူက သူ့ ကိုယ်သူ ထောက်လှန်းေ ရးဟောင်းပါလို့ လဲ ၀န်ခံရော ခင်ဗျားတို့ သြစီမြ န်မာအဖွဲ့ တွေ ကမ ဟုတ်ပါဖူး မယုံပါဖူး ငြင်းပြန်ရော ဘာတွေ လဲဗျ။ အရင်က သူ့ ကိုထောက်လှန်းေ ရးလို့ စွပ်စွဲပြီး ခုသူ ကဟုတ်ပါတယ် ပြောတော့ခင် ဗျားတို့ က မယုံကြ ပန်ဖူး။’’
အမည်မဖော်ဝံ့သူ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား သူရဲကောင်းတစ်ဦး (ယခု ဒုက္ခသည်၊ အော်ဇီ)။ ။ "ထူးထူးဟန်ရေ မင်းချိန်းကြိုးကြီးနဲ့ သြဇီတပတ် ပတ်တုန်းကလည်း ငါတို့မှာ ဘာမသိ ညာမသိနဲ့ မင်းနောက်လောက်ပြီး အားပေးခဲ့ရတယ်။ ခုလုပ်ပြန်ုပြီ။ ဒီမိုကရေစီအရေးကိုတော့ ထိခိုက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ မင်းနဲ့မည်ငါတို့ အားလုံးသိပြီးသားပါပဲ။ တိုက်စရာနောက်တနည်း ထပ်စဉ်းစား သူငယ်ချင်း။ ’’
ကြာကူလီစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ "စစ်တက္ကသို လ်တွေက ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး ဗိုလ်လောင်းဆုက ငွေဒါးပါ။ ရွှေဒါး မဟုတ်ပါဘူး။ ၈၇ မှာေ ကျာင်းဆင်းရင် စတသ အပတ်စဉ်-၂၈ ပေါ့။ ခုဆို အနည်းဆုံး အသက် ၄၇ နှစ်တန်းေ တွဖြစ်နေပြီ။ နောက် တစ်ချက်က ထောက်လှ မ်းရေးကို ဒုဗိုလ်အဆင့်နဲ့ ရောက်တယ် ဆိုတာလည်း တမျိုးပဲ။ ကျောင်းဆင်း ဆင်းချင်း ထောက်လှမ်းရေး တပ်ကို ဘယ်သူမှ မရောက်ပါဘူး။ ဗထူးမှာ combat သင်တန်း အရင် တက်ရတယ်။ အဲဒီက ထူးခွှန်မှ ရေကြည်အိုင်မှာ counter သင်တန်း တက်ခွင့် ရပြီး ထောက်လှမ်းေ ရးရောက်ပါတယ်။ ဒုဗိုလ်ကနေ ဗိုလ်ဖြစ်ဖို့ တစ်နှစ်သာ ကြာတဲ့အတွက် အဲဒီ တိုက်ခိုက်ေ ရးသင်တန်း၊ တန်ပြန်ေ ထာက်လှမ်းရေးသ င်တန်းနှ စ်ခုလုံး တက်ပြီးချိန်မှာ ဗိုလ်အဆ င့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဆိုတော့.. ထောက်လှမ်းရေးမှာ ဒုဗိုလ်အဆင့်နဲ့ တာဝန်ထမ်းေ ဆာင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ နောက်ပြီး ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ရန် သူတွေကို အရာရှိတွေ ကိုယ်တိုင် သတ်စရာ မလိုပါဘူး။ အခြားအ ဆင့်ရဲဘော်ေ တွရှိပါတယ်။ အဲဒီ အခြားအ ဆင့်ရဲဘော်တွေ ထွက်ြေ ပးလို့ ပြန်ဖမ်း မိတဲ့ အခါမျိုးသာ အရာရှိက ပစ်သ တ်ပါတယ်’’
ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား ဆိုသူများက သူများနောက်လိုက်ပြီး ဟေးလားဝါးလားပဲ လုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေကြတာပါ။ အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ ဘယ်သူဘာလုပ်လုပ် လက်ခုပ်တဖြောင်းဖြောင်းတီးပြီး ထောက်ခံနေကြပါတယ်။ အကျိုးအကြောင်းခြင့်ချိန်နိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ပါဘူး။ ဦးနောက်တွေကလည်း မသုံးတာကြတော့ မှိုတွေ တပ်နေကြပါပြီ။ အခြေအနေကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင်တော့ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများထဲတွင် စိတ်မမှန်သူများစွာရှိနေတာ အသေအချာပါပဲ..။ ဒါ့အပြင် အချင်းချင်း တိုင်ပင်မှု၊ စည်းလုံးမှု၊ ညှိနှိုင်းမှုမရှိကြပါဘူး။ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်လုပ်နေကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ငယ်ပေါင်းများစွာကွဲနေပြီး သူတလူငါတမင်းနဲ့ အစိုးရမကောင်းကြောင်းပြောချိန်တစ်ခုပဲ တက်ညီလက်ညီ ဝိုင်းအော်ကြပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ခွေးတွေလို စောင်နေကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်း အံ့ဘုန်းမြတ် နဲ့ အောင်မျိုးမင်း၊ ဇာနည်မောင်တို့က အခြောက်ကြီးတွေ ဖြစ်နေကြောင်း နီးစပ်သူများက ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းကလည်း ဝေနှင်းပွင့်သုန်က မပြောမဆိုနဲ့ ကရိန်းပေါ်ကနေ ကြိုးနဲ့ခုန်ချပြလိုက်ပါသေးတယ်။ ဇိုရဖမ်းနဲ့ ဝေနှင်းပွင့်သုန် တို့ကလည်း တစ်လင်နှမယား လုပ်နေကြတယ်လို့ ဗြိန်တိန်ရောက် မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းက ဆိုပါတယ်။ RFA က မင်ကြင်းနိုင်တစ်ယောက်လည်း VOA က သားညွန့်ဦးနဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ရှိနေတာကို စိုင်းသိန်းဝင်းနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းအတါင်းမှာပဲ နောက်မီးလင်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။ နောက်ထပ် RFA က မစုမွန် ကလည်း ဂျေဂျူဝိုင် ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ ကြိုက်ခဲ့လို့ ပြဿနာ အကြီးကြီးတက်ခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကပဲ နော်ဝေရောက် ဒုက္ခသည်မလေး မေကိုလတ် က ရုရှားက စစ်ဗိုလ်လေးတွေဆီမှာ အတူသွားပြီး အိပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မေးကိုလတ်အမေ မဗေဒါ (ခေါ်) မအေးအေးခိုင်ကလည်း ယောကျာ်ားနှစ်ယောက် ယူထားပါတယ်။ နောက်ထပ် မငယ်နိုင် ရဲ့ နောက်မီးလင်း သတင်းနဲ့ မိုးသွေးငယ်ရဲ့ ကြာကူလီသတင်းတွေကလည်း ပြန့်နေပါသေးတယ်။ မြန်မာအတိုက်အခံလောကအကြောင်းပြောရရင်တော့ စိတ်ပျက်စရာတွေက တပုံကြီးပါပဲ။ ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင်တော့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား ယောက်ျားအများစုက စိတ်ဖောက်ပြန်သူများ၊ ကြာကူလီရိုက်သူများ၊ အခြောက်များ၊ မိန်းမဆန်ဆန် အတင်းတုတ်သူများ ဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသမီးအများစုမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မတင်းတိမ်နိုင်သူများ၊ နောက်မီးလင်းသူများ၊ ဘုန်းကြီးတောင်မရှောင် ကြိုက်သူများ၊ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ယောက်ျားလေးတွေ ရှိတဲ့ တိုင်ပြည်ထိ သွားရောက် အတူအိပ်သူများ ဖြစ်ကြပါကြောင်း ခြုံငုံသုံးသပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား....။